Hihamalefaka indray ny tsiokan’ny Alizay, mandritra ity herinandro ity, ary tsy marin-toerana izany amin’ny faritra sasany. Hanorana somary tandrifin-drahona arahin-kotroka, indraindray, ny aty amin’ny faritry ny afovoan-tany, ny morontsiraka Atsimo Atsinanana ary ny faritra Bongolava sy Melaky, manomboka anio hatramin’ny alakamisy. Hiverina kosa ny orana miatoato any Analanjirofo sy Atsinanana. Handrahona ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany. Ho maina any andro amin’ny faritra sisa. Hisy fiakarany ny maripana ambony indrindra, ny tolakandro, manerana ny Nosy. 9°C ny ambany indrindra ary 23°C ny ambony indrindra, ny maraina, ary 18- 36°C ny tolakandro.
Nanomboka androany ny fanohizana ny adina fanatanjahantena ho an’ny fanadinana BEPC. Ny alakamisy vao hifarana ny adina. Misy ihany ny mpiadina tsy tonga na efa voazara avokoa aza ny taratasy fiantsoana, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra. Ho an’ny teny amin’ny kianjan’Alarobia, 25 ireo tsy niatrika izany. Tsy voatery hatao ny taranja fanatanjahantena fa manana safidy ny tsirairay.
Notoloran’ny fikambanana frantsay misahana ny fitsaboana ny aretina pnemonia fitaovana ahafahana mandrefy ny fiainan’ny olona mararin’ny pnemonia na aretin’ny taovam-pisefoana ny toeram-pitsaboana aretina pnemonia ao amin’ny hopitaly CHU Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina, Antsiranana ary Toliara. Hanatsarana ny fandraisana an-tanana marary ny fitaovana azo noho ny hetsiky ny fikambanan’ny mpitsabo ny aretina pnemonia eto amintsika.